पशुपतिको भेटी नै हुण्डीमार्फत कारोबार - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
पशुपतिको भेटी नै हुण्डीमार्फत कारोबार
प्रकाशित मिति: १३ कार्तिक २०७४, सोमबार
काठमाडाैं । सरकारले विभिन्न योजनासहित हुण्डीबाट हुने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने योजना बनाए पनि अझै नियन्त्रण हुने संकेत मिलेको छैन । पछिल्लो समयमा सो अवैध कारोबार सरकारी कर्मचारीदेखि धार्मिक स्थलबाट हुने गरेको प्रमाण फेला परेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न होटल र अपार्टमेन्टबाट हँुदै आएको हुण्डी कारोबार पवित्र पशुपति क्षेत्रबाटै पनि हुनथालेको भेटिएको छ ।
पशुपति विकास कोषबाट प्रत्येक दिन सार्वजनिक गर्ने भेटी संकलनको सूचीमा हुण्डीबाट कारोबार भएको रकमसमेत उल्लेख गरेका कारण अवैध कारोबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट हुने गरेको प्रमाणित भएको हो । सो कोषले पशुपतिनाथको मुख्य गेटमा राखिएको विद्युतीय डिस्प्लेमा समेत उल्लेख गरेको छ । सो डिस्प्लेमै हुण्डीमार्फत १६ हजार तीन सय ३० रुपैयाँको कारोबार गरेको देखाइएको छ । यसरी अवैध रहेको सो कारोबारलाई सरकारी निकायबाटै प्रयोगमा ल्याउँदा अर्बौं रुपैयाँ गैरबैंकिङ माध्यमबाट बाहिर पठाउने र नेपाल आउने गरेको खुलेको हो ।
पशुपतिनाथको मूलगेटमा राखिएको सो डिस्प्लेमा दैनिक यसरी हुण्डीबाट कारोबार हुने गरेको सार्वजनिक हँुदासमेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । सो अवैध कार्यमा कोषकै समितिको मिलेमतो भएको आरोपसमेत लगाइएको छ । सोबारे पटकपटक सम्पर्क गर्दा आधिकारिक मान्छे कोही पनि नभएको भन्दै पन्छाउने काम गरियो ।
धार्मिक आस्था रहेको पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरबाटै अवैध हुण्डीको कारोबारलाई प्राथमिकता दिनाले गैरकानुनी काम गर्नेहरु हौसिएका छन् । सो क्षेत्रबाट हुने हुण्डीको कारोबारमा भारतीय नागरिकहरुको संलग्नता रहेको पाइएको छ । त्यसलाई सहयोग पु¥याउने काम नेपाली व्यवसायीहरुले गर्र्दै आएका छन् ।
विश्व चर्चित पानामा पेपर्स लिक्सपछि काठमाडौंमा एकाएक हुण्डी कारोबारीहरू पक्राउ पर्न थालेसँगै चर्चामा रहेको सो अवैध कारोबारमा देशमा चर्चित उद्योगी–व्यवसायीहरूको संलग्नता रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुले पनि अहिलेसम्म कारबाही गर्न नसक्दा हुण्डीको कारोबारमा झन् तीव्रता आएको हो । विभिन्न व्यवसायबाट आर्जन गरेको रकम र करछलीको रकम लगानी गरेको रकमलाई हुण्डीमार्फत विदेश लैजाने गरेको समेत आरोप व्यवसायीहरुलाई लागेको छ ।
विदेशबाट नेपालमा र नेपालबाट विदेशमा पैसा पठाउने यस्तो कारोबार निरूत्साहित हुँदै गएका बेला पछिल्लो समय यसको कारोबार पुनः बढ्न थालेको देखिएको छ । अवैध रकम सुरक्षित रूपमा उता–यता गर्ने कारोबार नै हुण्डी हो । आपसी विश्वासका आधारमा यो कारोबार हुने गरेको छ । निश्चित कमिसनका आधारमा यस्तो काम गर्नेहरूले ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिदेखि नाम कहलिएका उद्योगी–व्यवसायीहरूको समेत रकम ओसारपसार गर्दछन् । स्वीस बैंकमा जम्मा भएको रकम होस् वा पानामा पेपर्सको खुलासा यी सबै हुण्डीकै माध्यमबाट भएको अनुमान प्रहरीको रहेको छ ।
आतंकवाद, लागूऔषध कारोबार, सुन तस्करी तथा हतियार तस्करहरूले पनि हुण्डीकै माध्यमबाट रकम ओसारपसार गर्ने गरेका छन् । हुण्डीबाट भित्रिने रकम अवैध हुने र राष्ट्रिय आयमा त्यसको गणना नहुने हुँदा त्यो रकम कहाँ परिचालन भयो पत्तोसमेत हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विश्वव्यापी सञ्जाल त्यसैका लागि गठन भए पनि सो सञ्जालले अहिलेसम्म नेपालमा कुनै कारबाही गर्न भने सकेको छैन ।
हुण्डी कारोबार असंगठित र अनौपचारिक रूपमा हुने गरेकाले यसमा संलग्नहरूले प्रायः व्यक्तिगत सम्बन्ध, सम्पर्क र विश्वासका आधारमा कारोबार गर्दै आएका छन् । कारोबार गर्नेसँग रकम बुझाएको, भुक्तानी गरेको लिखित प्रमाण केही पनि नहुने हँुदा रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीमा पुग्छ भन्ने भरोसा भने हुँदैन । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो रकम बीचैमा हराएका समाचार बाहिर आए पनि अनुसन्धान गर्ने आधार हुँदैन । यो आफैंमा अवैध कारोबार भएकाले हुण्डीवालाले बेइमानी गरी भुक्तानी नदिए कानुनी उपचारको बाटोसमेत समात्न सकिँदैन ।
पहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले हुण्डीबाटै रकम पठाउने गरेका थिए । बैंकिङ पद्धतिबाट रकम पठाउने व्यवस्था गर्नुअघि ९० प्रतिशतसम्म रकम हुण्डीबाट आउँथ्यो अहिले त्यसको विपरीत छ । तर पनि विदेशबाट आउने र विदेशिने ३० प्रतिशत रकम अझै पनि हुण्डीकै कारोबार हुने आँकलन बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूको रहेको छ ।
मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अनुशासनको कमी, महँगी, अभावजस्ता पक्षहरू हुण्डी कारोबारीका लागि अनुकूल र उपयुक्त समय रहने गरेको छ । हुण्डीबाट आएको सबै रकम सही प्रयोजनकै लागि आएको मान्न सकिँदैन । अनि यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ । अनधिकृत व्यापार व्यवसायसँगै राजस्वसमेत घटाउँछ । त्यसैले हुण्डी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अवैध कारोबार हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हुण्डीलाई निरूत्साहित गर्न दुईवटा उपाय अपनाइरहेको छ । पहिलो काम हुण्डी कारोबारीलाई कारबाही गर्ने अनि दोस्रोमा अनधिकृत व्यापार तथा सुन आयातलाई रोक्ने । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ । यसले नै हुण्डी कारोबार घटाएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढाएको दाबी राष्ट्र बैंकको रहे पनि पशुपति क्षेत्रबाटै सो अवैध कारोबार हुने गरेकाले नियन्त्रणभन्दा पनि झन् वृद्धि भएको देखिन्छ ।
प्रहरी प्रशासन, राजस्व र राष्ट्र बैंककै जिम्मेवार अधिकारीहरूको संरक्षणमा नेपालमा हुण्डी कारोबार फस्टाउँदै गएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । कालोधन हुण्डीमार्फत नै ओसारपसार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई नियन्त्रणतर्फ यी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूको ध्यान नगएकै कारण सो अवैध कारोबारले तीव्रता लिएको छ ।
हुण्डी तस्करहरूको सुरा, सुन्दरीमा समेत राष्ट्र बैंकका केही अधिकृतहरू भेटिएको तथ्य यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो हुण्डी कारोबारीहरूमा पवन सरिया, प्रदीप सरिया, मालिराम अग्रवाल, कृष्ण ज्ञवाली, धु्रव ज्ञवाली, सुभाष भण्डारी, राजु मालुको नाम अग्रपंक्तिमा आउने गरेको छ । कारोबारका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हुण्डीको तस्कर गर्नेमा पवन सरिया पहिलो नम्बरमा पर्दछन् भने त्यसपछि ज्ञवालीहरूको नाम आउँछ ।
सबैभन्दा ठूलो हुण्डीको अवैध कारोबार गर्ने पवन सरियाले ठूलो कारोबार आफ्नो ज्ञानेश्वरस्थित निवासबाट गर्दै आएका छन् । अन्य सानो–तिनो कारोबार महाबौद्ध, न्युरोड, नयाँ बसपार्क आसपास क्षेत्रमा रहेको कार्यालयबाट भुक्तानी दिने गरेको समेत खुलासा भएको छ । पवन सरिया, मालिराम अग्रवाल र जेएन एण्ड कृष्ण ज्ञवालीको समूह सुरुमा एउटै थियो । केही वर्षअघिमात्र यो समूह फुटेर जेएन, कृष्ण ज्ञवाली र धु्रव ज्ञवालीको समूह एउटा बनेको छ भने पवन सरिया र मालिराम अग्रवालको समूह यतिबेला अर्को बन्न पुगेको छ । यिनीहरू नेपालको सबैभन्दा ठूलो हुण्डीको अवैध कारोबार गर्ने गिरोहहरू हुन् ।
विदेशबाट नेपालमा रकम ल्याउन र नेपालबाट पठाउन वैधानिक बाटोभन्दा हुण्डीमार्फत कारोबार गर्ने कार्य बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको सर्वेक्षणअनुसार कोरियाबाट आउने रेमिट्यान्समध्ये ७० प्रतिशत हुण्डीमार्फत आउने गर्दछ । कोरियामा कार्यरत कामदारहरु २० प्रतिशतले मात्र रेमिट्यान्समार्फत रकम पठाउने गरेका छन् भने ७० प्रतिशतले हुन्डीमार्फत र १० प्रतिशतले औपचारिक हुन्डीमार्फत नै रकम पठाउने गरेका छन् । यसैगरी मलेसियाबाट तीन दशमलव पाँच प्रतिशत हुन्डी र दुई दशमलव चार प्रतिशतले औपचारिक तथा हुण्डी दुवै माध्यमबाट रकम पठाउने गरेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
विवादित भारतीय नागरिक राकेश अडुकिया पनि नेपालमा बसेर हुुण्डी कारोबार गर्ने व्यक्ति हुुन् । उनका भाइ हङकङमा बस्ने र बाबु भारतमा बस्ने गरेका छन् भने राकेशले नेपालमा बसेर हुुण्डीको संयोजन गर्ने गरेका छन् । अडुकिया जस्तै गरी विजय धारिवालले पनि नेपालमा बसेर हुुण्डीको कारोबार गर्ने गरेका छन् । खाडी मुलुकमा एक दशमलव एक हुण्डी र दुई दशमलव दुई प्रतिशत हुण्डी र औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्रिने गरेको छ भने भारतबाट १४ प्रतशित रकम हुण्डीमार्फत नेपाल भित्रिने गरेको छ । विकसित राष्ट्रहरूबाट २० प्रतिशत रकम हुण्डीमार्फत आउने गरेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । हुण्डी अन्तरदेशबीच पैसा कारोबार गर्ने गैरकानुनी तरिका हो ।
यस्तो कारोबार गर्दा सम्बन्धित देशहरूमा सम्पर्क व्यक्तिहरू राखेर ती व्यक्तिहरूमार्फत कारोबार हुने गर्दछ । नेपालबाट कुनै पनि देशमा पैसा पठाउन हुण्डी कारोबार गर्नेको सम्बन्धित देशमा रहेको एजेन्टले नेपालको एजेन्टलाई खबर गर्छ र नेपालको एजेन्टलाई पैसा दिएपछि सम्बन्धित देशको एजेन्टले आफ्नो व्यक्तिलाई पैसा उपलब्ध गराउँछ । यसबापत उनीहरूले निश्चित प्रतिशत कमिसनको रकम लिने गर्छन् । आर्थिक दैनिकबाट
अदालतले किन सकेन खड्काको घर फेला पार्न ?
काठमाडौँ । मुद्धा दायर भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि काठमाडों जिल्ला अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालिन […]
जाडो मौसममा किन बढ्छ हृदयघातको खतरा ?
एजेन्सी । जाडो मौसममा स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै थरीका समस्याहरु देखा पर्ने गर्छन् । यसको सबैभन्दा […]
चिकित्सक क्षेत्रमा बौद्धिक चोरीको विगविगी
काठमाडौँ । नाईजेरियामा गरिएको एक अनुसन्धानलाई पश्चिम नेपालमा गरिएको भन्दै बाली मेडिकल जर्नल र नेपाल मेडिकल […]
रियल मड्रिडले हान्यो ६ गोल
एजेन्सी । मंगलबार राति भएको च्याम्पियन्स लिगमा रियल मड्रिडले एपोइल निकोसियालाई ६-० गोलले पराजित गरेको छ […]
गाडीको टायरमुनि नै किन पिशाब गर्छन् कुकुर ?
असनेपाल न्युज । हामीले सधैँ देखिरहेका भएपनि प्रायले यो सोच्दैनन् कि अधिकांश कुकुरले गाडीको टायरमुनि वा […]
पहिलोपटक घटे मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता
काठमाडौं । मोबाइलको पहुँच बढेसँगै पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा पनि व्यापक वृद्धि […]
तीब्बत-नेपाल प्रसारणलाइन सम्भव, चीनलाई प्रस्ताव पठाउँदै सरकार
पहिलो चरणको निर्वाचन प्रचारप्रसारको आज अन्तिम दिन